သငျ့ ဖုနျး ဗိုငျးရပျဈ ကိုကျနပွေီဆိုတာ သိနိုငျမယျ့ အခကျြတှေ - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > သငျ့ ဖုနျး ဗိုငျးရပျဈ ကိုကျနပွေီဆိုတာ သိနိုငျမယျ့ အခကျြတှေ
သငျ့ ဖုနျး ဗိုငျးရပျဈ ကိုကျနပွေီဆိုတာ သိနိုငျမယျ့ အခကျြတှေ
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 8:25 AM Moblie Knowledge, နည်းပညာဗဟုသုတ
[Unicode ဖွငျ့ဖတျရနျ] ကှနျပြူတာ တှမှေ မဟုတျပါဘူး။ ဖုနျး တှလေညျး ဗိုငျးရပျဈ ဝငျပါတယျ။ ဖုနျး တှမှော ဗိုငျးရပျဈ ဝငျတဲ့အခါ သိပျမသိသာပါဘူး။ ဖွဈနကြေ မဟုတျလို့ သတိမထားမိတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဲ့ဒီတော့ ဖုနျး ကို ဗိုငျးရပျဈ ကိုကျနပွေီဆိုတာ အလှယျတကူ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ။
Data သုံးတဲ့နှုနျးက အရမျးမွနျလာပါမယျ။ Virus တို့ရဲ့ သဘောတရားက App တှကေို Background ကအစ အကုနျ run ပဈလို့ သငျ့ Data သုံးနှုနျး မတရား မွနျလာပါလိမျ့မယျ။
2. Apps down
ဂိမျးဆော့ နတေုနျး ရပျသှားတာ။ ဖုနျးပွောနရေငျး ရုတျတရကျ ကသြှားတာ။ Facebook သုံးနရေငျး ခကျြခငျြးပိတျသှားတာ စတာတှဟော ဗိုငျးရပျဈ ရဲ့ လက်ခဏာ ပါပဲ။
ဖုနျးသုံး နရေငျး Website တှေ ဝငျကွညျ့ရငျ ကွျောငွာလေးတှေ ပျေါပျေါလာတတျပါတယျ။ ဒါကတော့ ဖွဈနကေပြါ။ ဒါပမေယျ့ အလိုလိုနရေငျး Pop-up တှေ ပျေါလာပွီဆိုရငျတော့ အဲ့ဒါ Virus ကွောငျ့ပါ။
ဖုနျး Bill တှေ မတရားဖွတျသှားတာ package တှဝေယျပမေယျ့ ခဏလေးနဲ့ကုနျသှားတာ စတာတှဟော Virus က အကုနျလြှောကျ run နလေို့ ဖွတျသှားတာ ဖွဈပါတယျ။
5. Battery reduce
ဖုနျးအား အပွညျ့သှငျးထားပမေယျ့ နာရီဝ ကျလောကျပဲ သုံးရတာ။ သငျ့ ဖုနျးအား ကနျြနဦေးမယျ ထငျပမေယျ့ power ပိတျပွီး ကသြှားတာ မြိုးတှဟော Virus ရဲ့လကျခကျြတှပေါပဲ။
ဒါပမေယျ့ ဒီအခကျြတှအေကုနျလုံးဟာ သိသိသာသာနဲ့ လှနျလှနျကြူးကြူးဖွဈမှသာ Virus ဝငျနပွေီလို့ သတျမှတျလို့ရတာပါ။ သာမနျအကွောငျးတဈခုကွောငျ့ အထကျပါအခကျြမြားလညျး ဖွဈနိုငျတယျဆိုတာ သတိပွုစလေိုပါတယျ။
သင့် ဖုန်း ဗိုင်းရပ်စ် ကိုက်နေပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်တွေ
[Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန်] ကွန်ပျူတာ တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်း တွေလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်ပါတယ်။ ဖုန်း တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်တဲ့အခါ သိပ်မသိသာပါဘူး။ ဖြစ်နေကျ မဟုတ်လို့ သတိမထားမိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဖုန်း ကို ဗိုင်းရပ်စ် ကိုက်နေပြီဆိုတာ အလွယ်တကူ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Data သုံးတဲ့နှုန်းက အရမ်းမြန်လာပါမယ်။ Virus တို့ရဲ့ သဘောတရားက App တွေကို Background ကအစ အကုန် run ပစ်လို့ သင့် Data သုံးနှုန်း မတရား မြန်လာပါလိမ့်မယ်။
ဂိမ်းဆော့ နေတုန်း ရပ်သွားတာ။ ဖုန်းပြောနေရင်း ရုတ်တရက် ကျသွားတာ။ Facebook သုံးနေရင်း ချက်ချင်းပိတ်သွားတာ စတာတွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ လက္ခဏာ ပါပဲ။
ဖုန်းသုံး နေရင်း Website တွေ ဝင်ကြည့်ရင် ကြော်ငြာလေးတွေ ပေါ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဖြစ်နေကျပါ။ ဒါပေမယ့် အလိုလိုနေရင်း Pop-up တွေ ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါ Virus ကြောင့်ပါ။
ဖုန်း Bill တွေ မတရားဖြတ်သွားတာ package တွေဝယ်ပေမယ့် ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတာ စတာတွေဟာ Virus က အကုန်လျှောက် run နေလို့ ဖြတ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းအား အပြည့်သွင်းထားပေမယ့် နာရီဝ က်လောက်ပဲ သုံးရတာ။ သင့် ဖုန်းအား ကျန်နေဦးမယ် ထင်ပေမယ့် power ပိတ်ပြီး ကျသွားတာ မျိုးတွေဟာ Virus ရဲ့လက်ချက်တွေပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးဟာ သိသိသာသာနဲ့ လွန်လွန်ကျူးကျူးဖြစ်မှသာ Virus ဝင်နေပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ရတာပါ။ သာမန်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် အထက်ပါအချက်များလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုစေလိုပါတယ်။
သငျ့ ဖုနျး ဗိုငျးရပျဈ ကိုကျနပွေီဆိုတာ သိနိုငျမယျ့ အခကျြတှေ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:25 AM Rating:5[Unicode ဖွငျ့ဖတျရနျ] ကှနျပြူတာ တှမှေ မဟုတျပါဘူး။ ဖုနျး တှလေညျး ဗိုငျးရပျဈ ဝငျပါတယျ။ ဖုနျး တှမှော ဗိုငျးရပျဈ ဝငျတဲ့အခါ သိပျမသိသာပါဘူး...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:25 AM